> Resource > Ladnaansho > Desktop Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Computer Desktop
Sidee ayaan u soo kaban karto, Desktop Data?
Kombiyuutar desktop Dell aan qabo. Waxaan formatted xijaab ku yaal, maxaa yeelay, waxaan doonayay in aan computer si aad u nadiifiso. Sidaas nasiib daro dhammaan faylasha on xijaab in tageen. Waxaan halkaas ka yaabban yihiin qaar ka mid ah siyaabaha aan dib u hanato karo files iga luntay? Fadlan caawi Thanks.
Waa arrin xanuun badan marka desktop arrintan khasaaro xogta dhacay. Waxaad dareemi dedejisanina, maxaa yeelay, waxaad files si joogto ah baaba'aan laga yaabaa. Laakiin tani ma aha sax ah oo run ah. Kuwani files laga badiyay, kaas oo lagu ogaaday doonaa xogta sida geli karin ka dib marka aad iyaga laga badiyay, weli waa ku wadid aad desktop ee adag. Tani waxay ka dhigan ayaad ugu hanato karo files lumay ka hor xogta cusub ku desktop iyaga overwrites.
Si aad u soo kabsado xogta ka computer desktop, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka xogta desktop ah sida Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Wax kasta oo sababo in faylasha aad lumeen, sida tirtirka, formatting, nidaamka ama shil gaari ku adag, oo aad iyaga u hanato karaa Wondershare Data Recovery. Tani qalab yaab leh awoodo inuu ka soo kabsado noocyada file badan oo ka adag drive desktop, oo ay ku jiraan videos, sawiro, waraaqaha xafiiska, emails, cad. Waxaa la socon kara dhammaan noocyada desktop sida Lenovo, Dell, HP, Apple iwm
Waxaad bilaabi kartaa desktop kabashada xogta computer soo degsado version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran. Fadlan dooro nooca saxda ah ee nidaamka hawlgalka laptop aad.
Qabtaan Desktop Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Hagaha soo socda waa u desktop in waddaa OS Windows. Milkiilayaasha desktop Mac karto soo kabashada in hawlaha la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ka soo kabsado xogta ka desktop
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo barnaamij ku saabsan desktop, waxaad ka arki kartaa suuqa kala bilowga liiska 3 hababka soo kabasho. Saddexda hababka soo kabashada waxay leedahay waxyaalo iyaga u gaar ah, sida aad ka arki kartaa image hoose.
Halkan, ha la qaado "lumay Recovery File" sida isku day ah markii ugu horeysay.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan drive adag ama xijaab in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 baarista drive adag desktop ama xijaab
Markaas barnaamijka si toos ah lagu ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan qoruhu on desktop, waxa kaliya oo aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka xogta laga badiyay.
Fiiro gaar ah: Haddii files on desktop ayaa laga badiyay sababta oo ah drive adag ama formatting xijaab, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 ceshano xogta ka desktop xushay
In tallaabadii u dambaysay, ka helay files aad drive desktop adag lagu soo bandhigi doonaa noocyada file ama waddooyinkiisa. Waxaad ka eegi kartaa magacyada file ka soo si loo ogaado inta files waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" dhammayn kabashada xogta desktop. Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan waddo aad desktop si loo badbaadiyo macluumaadka soo kabsaday, fadlan ha badbaadiyo xogta Jidka asalka dib.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka desktop drive burburtay ama ku guuldareystay adag?
Qaar badan oo dadka isticmaala desktop aad arrintan kala kulantay. Desktops ay lahayn dheer ay maamulaan. Xaaladdan oo kale, fursadaha soo kabsaday xogta desktop weli ka jiraan. Waxaad isku dayi kartaa xira drive adag ee aad desktop la computer kale oo ay isticmaalaan Wondershare Data Recovery in la soo celiyo aad. Laakiin fadlan hubi in drive ay adag tahay si fiican u waddaa on computer kale.